GRC Picking effect-GRC Picking effect-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
GRC caadada dhamaadka-sare
Gudida resini resins-ka loo yaqaan 'Flame panel resin panel'
Tilmaaminta Farshaxanka TCP
Gudiga baqshadda prefabricated
Ku saabsan Beilida
Kiisaska Mashruuca Shiinaha
Kiisaska Mashruuca Dibadda
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>GRC caadada dhamaadka-sare>Saamaynta GRC
Iyo meesha Asal ahaan: Nanjing, Jiangsu, Shiinaha
Magaca Brand: Beildia
Number Model: Qaadashada GRC
GRC (Fiber-ka muraayadaha ee la xoojiyay ee la taaban karo) u isticmaal hoobiye sibidhka sidii sheyga aasaasiga ah, oo u isticmaal dhalo-weelka alkali u adkaysiga waxqabadka GRC. Habka wax soo saarka ee GRC waa nooc gaar ah. U isticmaal burushka hawada si aad ugu buufiso isku darka sibidhka iyo fiber dhalada ah si caaryada prefabricate, waxay hagaajin kartaa isku darka, adkeynta, iyo caabbinta dillaaca sheyga adoo hubinaya dhirirka maaddada.
Tayada sheyga sidaas loo soo saaray aad ayuu uga duwan yahay tan caadiga ah ee geeddi-socodka caadiga ah ee la taaban karo. Yurub iyo Ameerika, xaashida GFRC-lakabka ah ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa sida gudida qurxinta darbiga bannaanka.
habka wax soo saarka:
Performance Shuruudaha tilmaame
Soo laabashada xoogsashada saamiga ugu sareeya / MPa Qiimaha celceliska 7
Hal baloog oo ugu yar 6.2
Awooda ugu dambeysa ee foosha / MPa Qiimaha celceliska 18
Hal baloog oo ugu yar 15
Awoodda Saameynta / kJ / M2 8
Cufnaanta mugga (qallalan) / g / cm3 1.8
Nuujinta biyaha 14
Xakamaynta iska caabin Ka dib 25 wareeyno-dhalaalid, ma jirin baabi'inta, daadinta iyo ifafaale kale oo waxyeelo leh.
Faahfaahin Gaar ah:
1. Balaasti sare. Isticmaal buuxa u isticmaal teknoolojiyada naqshadeynta muuqaalka saddex-cabbirka leh ee dhijitaalka ah, si sheygu si sax ah u meeleeyo naqshadaynta, isla mar ahaantaana uu ku muujin karo saameynta qurxinta qaab dhismeedka iyo astaamaha muuqaalka midab kasta, naqshadeynta ama muujinta.
2. Waxqabadka wanaagsan ee ilaalinta dusha sare. Qaadashada nidaam badbaado oo dhammaystiran, shaqada ka-hortagga dib-u-dhigidda iyo is-nadiifinta ayaa la xaqiijiyaa halka shaqada biyuhu ka-ilaalinayaan dusha sare ee sheyga la hubiyey, iyo cimri dhererka saameynta qurxinta muuqaalka dhismaha ee la hagaajiyay.
3. cimri aad u fiican. Xarka sare ee loo yaqaan 'PVA fiber' ee jilicsanaanta waxaa loo isticmaalaa sidii qalab xoojin ah oo loogu talagalay lakabka qaab dhismeedka GRC, iyo PP fiber waxaa laga caawiyaa sidii loo wanaajin lahaa caabbinta microcracking ee lakabka dusha sare, sidaas awgeedna loo wanaajinayo cimri dheelinta alaabada iyo sii dheereeynta nolosha adeegga dhismayaasha.
4. Darbiga khafiifka ah iyo kan dhuuban. Wax-soo-saarku wuxuu garan karaa astaamaha taargooyinka waaweyn iyo darbiyada khafiifka ah, waxay si weyn hoos ugu dhigaan culeyska culeyska ee dhismayaasha, u oggolaadaan alaabada in lagu dabaqo darbiyada bannaanka ee dhismayaasha dhaadheer, u oggolaadaan qaababka dhismaha inay noqdaan kuwo jajaban oo leh sumcad guud oo caan ah.
Yaraynta tamarta iyo yareynta dareeraha: marka la barbar dhigo qaababka kale ee loo xirxiro, GRC waxay isticmaashaa tamar yar inta ay ku gudajireyso sameynta iyo rakibida. Aqoonyahanada reer Japan waxay sameeyeen isbarbar dhig kaarboonka kaarboonka ah ee udhaxeeya albaabo GRC iyo derbiga la taaban karo ee la xoojiyey, iyo isticmaalka alwaaxa GRC wuxuu yareyn karaa qiiqa kaarboonka 30%.
Hadhuudhka alwaax qorista GRC
Saamaynta GRC Rock
Xiriirimaha ugu waaweyn
Xuquuqda daabacaadda j 2020 Nanjing BeiLiDa Qalabka Qalabka cusub ee injineernimada. Co., Ltd.